ရျောနယျဒို ရောကျရှိလာခဲ့တာ ကွောငျ့ ကှငျးပွငျပ ရရှိလာတဲ့ ပရိသတျအားပေးမှုတှဟောလညျး အံမခနျးပါပဲ။
ယူနိုကျတကျအသငျးက ရျောနယျဒို ကို ချေါယူနိုငျလိုကျပွီးလို့ ကွညော အပွီးမှာ အသငျးရဲ့ တရားဝငျ အငျစတာဂရမျ အကောငျ့ ဟာလညျး ပရိသတျတှေ သိနျးခြီ တိုးပှား လာခဲ့ ပါတယျ။
ဇူလိုငျလ အထိ ပရိသတျ ၆ သိနျး ၇ သောငျးကြျောသာ ရှိနရောကနေ သွဂုတျလ မှာတော့ ပရိသတျ ၄၄ သိနျးကြျော ဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။
အခုလညျး ယူနိုကျတကျဆီ တကြော့ပွနျ ရောကျလာခဲ့တဲ့ ရျောနယျဒိုရဲ့ကြောနံပါတျ (၇) ဂြာစီဟာ အားကစားလောကမှာ စံခြိနျတငျရောငျးခနြရေကွောငျးသိရပါတယျ။
အိုးထရကျဖို့ဒျက ယူနိုကျတကျ အမှတျတရပစ်စညျးဆိုငျမှာ Ronaldo No.7အင်ျကြီကို ဝယျယူလို့ရပွီလို့ကွငွောလိုကျခြိနျမှာ လိုခငျြသူတှေ မြားပွားလှနျးတာကွောငျ့ တနျးစီစောငျ့ဆိုငျးနရေတဲ့ လူတနျးရှညျကွီး ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဆိုရှယျမီဒီယာတှမှောလညျး ဂြာစီ ဝယျယူဖို့ တနျးစီ စောငျ့ဆိုငျး နတေဲ့ လူတနျးရှညျကွီး ပုံတှဟော ပြံနှံခဲ့ပါတယျ။
ယူနိုကျတကျမှာ ကြောနံပါတျ ၇ ကို ရျောနယျဒိုဝတျဆငျမယျလို့ တရားဝငျ ကွညောခကျြ ထှကျပျေါ အပွီးမှာ ယူနိုကျတကျရဲ့ အှနျလိုငျးစတိုးမှာလညျး ကြောနံပါတျ၇ ရောငျးအားက တဈရကျတညျးမှာတငျ အံ့သွဖှယျ ကောငျးလောကျအောငျ အမွငျ့ဆုံးစံခြိနျတငျတဲ့ အထိရောငျးခခြဲ့ရပါတယျ။
ယူနိုကျတကျရဲ့ အှနျလိုငျးစတိုးကို Fanatics ကလုပျဆောငျနတောဖွဈပါတယျ။
Fanatics ဟာ ကမ်ဘာတလှားက ကလပျပေါငျး၃၀၀ကြျောတို့အတှကျ အလုပျလုပျပေးနတေဲ့ ကုမ်ပဏီလညျးဖွဈပါတယျ။
ရျောနယျဒိုရဲ့ ဂြာစီရောငျးအားက ၁၂နာရီအတှငျးမှာ ပေါငျး (£32.5) သနျးဖို့အထိရှိခဲ့တယျ လို့ဖျောပွနကွေပွီး (၂၄) နာရီ ပွညျ့ခြိနျ မှာရျောနယျဒိုရဲ့ နာမညျ နဲ့ ကြောနံပါတျ ပါဝငျတဲ့ ဂြာစီ ရောငျးခြ ရမှုဟာ အနညျးဆုံး ၈ သိနျး ကနေ ၉ သိနျး အကွား ရှိလိမျ့မယျလို့ တှကျခကျြထားကွပါတယျ။
ဒါကွောငျ့လညျး ရျောနယျဒိုရဲ့ ဂြာစီ ရောငျးခြ ရမှုဟာ ဘောလုံး သမိုငျးရဲ့ ၂၄ နာရီ အတှငျးမှာ အမြားဆုံး ရောငျးခရြမှုလညျး ဖွဈလာတော့မှာပါ။
ပီအကျဈဂြီ အသငျးမှာ ပထမ ၁ နာရီ အတှငျး အရအေတှကျ ၂ သိနျးကြျော ရောငျးခြ ခဲ့ရတဲ့ မကျဆီ ရဲ့ ကြောနံပါတျ ၃၀ ဂြာစီ ရောငျးအားကို ကြျောဖွတျနိုငျခဲ့တယျလို့လညျး သတငျးတှကေဖျောပွနကွေပါတယျ။
ဒီလို စံခြိနျတငျ အရအေတှကျ နဲ့ ရောငျးခြ ရမှု ဟာ ပီအကျဈဂြီ နဲ့ ယူနိုကျတကျ တို့ထကျ ဂြာစီ စပှနျဆာတှေ ဖွဈတဲ့ Nike နဲ့ Adidas တို့ကို ပိုမို အကြိုးအမွတျ ဖွဈထှနျး စပေါတယျ။
ပီအကျဈဂြီ အသငျးဟာ Nike ရဲ့နောကျထပျ အမှတျတံဆိပျတဈခုဖွဈတဲ့ ဂြျောဒနျ အမှတျတံဆိပျကို ဝတျဆငျခဲ့ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဂြာစီရောငျးရငှမှောလညျး Nike ဆီကနေ ဘကျစကတျဘောကစားသမား မိုကျကယျဂြျောဒနျက ရောငျးရငှရေဲ့ ရာခိုငျနှုနျး တဈခုကို ရရှိထားပါတယျ။
ဂြာစီ စပှနျဆာ ပေးတဲ့ ကုမ်ပဏီတှနေဲ့ ခြုပျဆိုထားတဲ့ စာခြုပျတှအေရ သကျဆိုငျရာ အသငျးတှဟော ရောငျးခရြငှရေဲ့ ၅-၁၀% ကွားမှာသာ ဂြာစီရောငျးခရြငှရေဲ့အကြိုးအမွနျကိုခံစားရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေ အနိုင်ရလိုက်တဲ့ ဂျာစီအဝယ်ပြိုင်ပွဲ
ရော်နယ်ဒို ရောက်ရှိလာခဲ့တာ ကြောင့် ကွင်းပြင်ပ ရရှိလာတဲ့ ပရိသတ်အားပေးမှုတွေဟာလည်း အံမခန်းပါပဲ။ ယူနိုက်တက်အသင်းက ရော်နယ်ဒို ကို ခေါ်ယူနိုင်လိုက်ပြီးလို့ ကြေညာ အပြီးမှာ အသင်းရဲ့ တရားဝင် အင်စတာဂရမ် အကောင့် ဟာလည်း ပရိသတ်တွေ သိန်းချီ တိုးပွား လာခဲ့ ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ အထိ ပရိသတ် ၆ သိန်း ၇ သောင်းကျော်သာ ရှိနေရာကနေ သြဂုတ်လ မှာတော့ ပရိသတ် ၄၄ သိန်းကျော် ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
အခုလည်း ယူနိုက်တက်ဆီ တကျော့ပြန် ရောက်လာခဲ့တဲ့ ရော်နယ်ဒိုရဲ့ကျောနံပါတ် (၇) ဂျာစီဟာ အားကစားလောကမှာ စံချိန်တင်ရောင်းချနေရကြောင်းသိရပါတယ်။ အိုးထရက်ဖို့ဒ်က ယူနိုက်တက် အမှတ်တရပစ္စည်းဆိုင်မှာ Ronaldo No.7အင်္ကျီကို ဝယ်ယူလို့ရပြီလို့ကြေငြာလိုက်ချိန်မှာ လိုချင်သူတွေ များပြားလွန်းတာကြောင့် တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေရတဲ့ လူတန်းရှည်ကြီး ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာလည်း ဂျာစီ ဝယ်ယူဖို့ တန်းစီ စောင့်ဆိုင်း နေတဲ့ လူတန်းရှည်ကြီး ပုံတွေဟာ ပျံနှံခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်မှာ ကျောနံပါတ် ၇ ကို ရော်နယ်ဒိုဝတ်ဆင်မယ်လို့ တရားဝင် ကြေညာချက် ထွက်ပေါ် အပြီးမှာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ အွန်လိုင်းစတိုးမှာလည်း ကျောနံပါတ်၇ ရောင်းအားက တစ်ရက်တည်းမှာတင် အံ့သြဖွယ် ကောင်းလောက်အောင် အမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်တဲ့ အထိရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ရဲ့ အွန်လိုင်းစတိုးကို Fanatics ကလုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Fanatics ဟာကမ္ဘာတလွှားက ကလပ်ပေါင်း၃၀၀ကျော်တို့အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ ကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရော်နယ်ဒိုရဲ့ ဂျာစီရောင်းအားက ၁၂နာရီအတွင်းမှာ ပေါင်း (£32.5) သန်းဖို့အထိရှိခဲ့တယ် လို့ဖော်ပြနေကြပြီး (၂၄) နာရီ ပြည့်ချိန် မှာရော်နယ်ဒိုရဲ့ နာမည် နဲ့ ကျောနံပါတ် ပါဝင်တဲ့ ဂျာစီ ရောင်းချ ရမှုဟာ အနည်းဆုံး ၈ သိန်း ကနေ ၉ သိန်း အကြား ရှိလိမ့်မယ်လို့ တွက်ချက်ထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ရော်နယ်ဒိုရဲ့ ဂျာစီ ရောင်းချ ရမှုဟာ ဘောလုံး သမိုင်းရဲ့ ၂၄ နာရီ အတွင်းမှာ အများဆုံး ရောင်းချရမှုလည်း ဖြစ်လာတော့မှာပါ။
ပီအက်စ်ဂျီ အသင်းမှာ ပထမ ၁ နာရီ အတွင်း အရေအတွက် ၂ သိန်းကျော် ရောင်းချ ခဲ့ရတဲ့ မက်ဆီ ရဲ့ ကျောနံပါတ် ၃၀ ဂျာစီ ရောင်းအားကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်း သတင်းတွေကဖော်ပြနေကြပါတယ်။
ဒီလို စံချိန်တင် အရေအတွက် နဲ့ ရောင်းချ ရမှု ဟာ ပီအက်စ်ဂျီ နဲ့ ယူနိုက်တက် တို့ထက် ဂျာစီ စပွန်ဆာတွေ ဖြစ်တဲ့ Nike နဲ့ Adidas တို့ကို ပိုမို အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ထွန်း စေပါတယ် ။ ပီအက်စ်ဂျီ အသင်းဟာ Nike ရဲ့နောက်ထပ် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဂျော်ဒန် အမှတ်တံဆိပ်ကို ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဂျာစီရောင်းရငွေမှာလည်း Nike ဆီကနေ ဘက်စကတ်ဘောကစားသမား မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်က ရောင်းရငွေရဲ့ ရာခိုင်နှုန်း တစ်ခုကို ရရှိထားပါတယ်။ ဂျာစီ စပွန်ဆာ ပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်တွေအရ သက်ဆိုင်ရာ အသင်းတွေဟာ ရောင်းချရငွေရဲ့ ၅-၁၀% ကြားမှာသာ ဂျာစီရောင်းချရငွေရဲ့အကျိုးအမြန်ကိုခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။